I-One Pack Stabilizer ye-Flexible
I-One Pack Stabilizer ye-Floorings
I-One Pack Stabilizer Yokugawula Amagwebu
I-One Pack Stabilizer Yesicelo Sezokwelapha
I-One Pack Stabilizer yamaphrofayli
I-One Pack Stabilizer ye-Transparent
Izinzuzo zothango lwe-pvc zingokulandelayo
1. Ukubukeka kukuhle futhi kusemkhathini, akulula ukuguga futhi kuphele, futhi ngeke kuqubuke ngenxa yokuguga; 2. Amandla aphakeme, amelana nengcindezi yomoya yezinga le-6, futhi akulula ukulinyazwa ngamandla angaphandle; 3. Umkhiqizo kulula ukuwuhlanganisa nokuwuqaqa. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile ...
I-PVC resin ingumgubo ophuzi omhlophe noma okhanyayo. Le resin ayinakusetshenziswa ngqo, kepha kufanele iguqulwe ngokungeza izinguquko ezahlukahlukene ukulungiselela imikhiqizo ehlukahlukene. Ngokuya ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ehlukile, izinguquko ezihlukile zingangezwa ukukhombisa izakhiwo ezahlukahlukene zomzimba nezomshini. Ingeza i-appr ...
Isicelo nezinzuzo ze-PVC
Igama elithi PVC lisho igama elisetshenziselwa umhlobiso wokukhangisa owenziwe nge-PVC, okuyinto ethandwa kakhulu yokuhlobisa impahla namuhla. Igama eligcwele le-PVC yiPolyvinylchlorid, ingxenye eyinhloko yi-polyvinyl chloride, nezinye izinto ezifakiwe ukuqinisa ukumelana nokushisa, ubunzima, ...
Izinzuzo nobubi be-pvc
Izinzuzo: I-PVC eqinile ingenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu zepulasitiki. Izinto ze-PVC yinto engeyona eye-crystalline. Ekusetshenzisweni kwangempela, izinto ze-PVC zihlala zengeza izinto zokuqinisa, izinto zokuthambisa, ama-ejenti wokucubungula asizayo, ama-pigment, ama-agent wokumelana nomthelela nezinye izithasiselo. Impahla ye-PVC ine-non-flammabilit ...
I-PVC enegama elithi PVC inezinzuzo ezilandelayo
1. Isisindo esincane, ukwahlukanisa ukushisa, ukulondolozwa kokushisa, ubufakazi bomswakama, ukuvimbela ilangabi, ukumelana ne-asidi ne-alkali, nokumelana nokugqwala. 2.Ukuzinza okuhle, izakhiwo ze-dielectric, ukuqina, ukulwa nokuguga, i-welding elula nokubopha. 3. Amandla anamandla okuguquguquka nobulukhuni bomthelela, ukunwebeka okuphezulu ...
Izinzuzo eziphawulekayo zaphansi kwe-PVC yezemidlalo
Iphansi lezemidlalo le-PVC luhlobo lwesitezi esenzelwe ngokukhethekile izindawo zezemidlalo ezisebenzisa impahla ye-polyvinyl chloride. Ngokuqondile, isebenzisa i-polyvinyl chloride ne-resin yayo ye-copolymer njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko, ifaka ama-filler, ama-plasticizers, ama-stabilizers, ama-colorants nezinye izinto ezisizayo. Kuqhubeka ...
Ngenxa yokuzinza kwayo kwamakhemikhali okuphezulu kwe-pvc,
Ingasetshenziselwa ukwenza amapayipi alwa nokugqwala, amapayipi wokufaka, amapayipi kawoyela, amaphampu we-centrifugal kanye nama-blower, njll. Amabhodi ama-Polyvinyl chloride asetshenziswa kakhulu embonini yamakhemikhali ukwenza amalayili wamathangi wokugcina ahlukahlukene, amabhodi lukathayela wezakhiwo, umnyango kanye izakhiwo zewindi, udonga d ...
Igama eligcwele le-pvc lesiNgisi yi-poly vinyl chloride
Igama eligcwele le-pvc lesiNgisi yi-poly vinyl chloride (isakhiwo se-PVC yamangqamuzana). Ngokuvamile, i-pvc yethu ejwayelekile uhlobo oluthile lomhlobiso wepulasitiki. Igama layo lamakhemikhali yi-polyvinyl chloride, eyakhiwe nge-resin ye-amorphous thermoplastic resin eyenziwe nge-polymerization ye-vin ...
Kuthiwani nge-PVC plastic
1. Ngenxa yokunganeli kwezimpawu zempahla ye-PVC uqobo, abantu kufanele bangeze inani elikhulu lezithasiselo ukusimamisa ipulasitiki le-PVC. Eqinisweni, ipulasitiki ye-PVC emsulwa ayinabuthi. Ngaphansi kwesenzo esiphelele sezithasiselo ezahlukahlukene, izinto ezinobuthi zikhiqizwa yi-reacti yamakhemikhali ...
Ingabe i-pvc plastic inemvelo?
1. Izinga lokushisa le-embrittlement ngu -35 ℃. Ukwemukelwa kuzokwenzeka ngezansi -35 ℃, futhi ukumelana okubandayo akukuhle njenge-polyethylene. Inani elibikiwe lokushisa kwengilazi lokuguquka kwe-polypropylene yi-18qC, i-OqC, i-5 ℃, njll. Lokhu kungenxa yokuthi abantu basebenzisa amasampula ahlukile, aqukethe i-di ...
ukucutshungulwa kwezinto ezibonakalayo ze-pvc
Inqubo yokubumba yamapayipi e-polyvinyl chloride idinga ukuqala ngezinto ze-pvc. Okokuqala, ifomula lezinto ezibonakalayo lingahlukaniswa libe yi-polyvinyl chloride ethambile ne-polyvinyl chloride eqinile ngokuya ngamanani ahlukene okusetshenziswa kwama-stabilizers, ama-plasticizers, nama-lubricants. Eliphezulu polyvinyl chl ...
Kushintshwe inkathi ye-pvc plastic 5G
Okokuqala, kuzoba nezinguquko ezinkulu kuzinsizakalo zobuchwepheshe kanye nokuhwebelana komkhakha kwamapulasitiki aguquliwe. Ngenkathi yenethiwekhi ye-5g, abasebenzisi emadolobheni ahlukene bangaxhuma ngokushesha konjiniyela bezobuchwepheshe ngokuxhuma ngqo kwevidiyo. Inkinga yomsebenzisi ingakhonjiswa kunjiniyela ...
I-AIMSEA TECHNOLOGY PARK, I-QUIBAO ROAD, i-XINTANGCUN, ISIFUNDA SASE-HUIYANG, E-HUIZHOU, E-GUANGDONG, ECHINA 516221
Isisimamisi se-PVC, I-PVC Heat Stabilizer, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC One Pack Stabilizer, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, PVC Izithasiselo,